Fikarohana momba ny firaisana Ny tranga Reincarnation Horace sy John Dodge, Mpisava Pioneer Dodge an-dafy, amin'ny Flying Car AeroMobile Inventors Jaraj Vaculik sy Stefan Klein - Fikarohana Reincarnation
Nohazavaina sy nohamafisin'ny: Ny Fanahy Ahtun dia ao amin'ny sehatry ny Fikarohana momba ny Reyncarnation Ryerson-Semkiw
Dodge Brothers sy ny fiara manao fampisehoana: Automobiles manidina ho tetikasan'ny Reincarnation
Ireo rahalahin'i Dodge, Horace sy John, mpisava lalana ny indostrian'ny fiara fiara eto Etazonia. Ny niandoha ho machinista izay nanome ampahany tamin'ny mpanamboatra fiara tany am-boalohany, toa an'i Ford, avy eo nanangana ny orin'izy ireo fiara izy ireo ary namokatra ny fiara voalohany tao 1917. Samy maty ny tratry ny grlu tao 1920 ireo mirahalahy. Dodge, orinasa, dia manohy mamokatra fiara mandraka ankehitriny ary fantatra izy ireo amin'ny famokarana fiara mandeha amin'ny herinaratra Hemi motera.
Tiako foana ny mitondra fiara haingana sy hozatra. Fony tanora aho dia nividy Dodge Charger izay raiko nitondra fiara. Tamin'ny fiainako efa lehibe, Dodge Charger sy Dodge Challengers dia anisan'ireo fiara tiako indrindra raha manofa rehefa manao dia lavitra aho.
Nanana Pontiac Grand Prix GT aho, fiara izay namboarin'ny General Motors, ary nanana solika Fiat Spyder 2000 voan'ny injatera roa, topon-droa indroa, fiara fanatanjahantena nandritra ny 30 taona. Afaka nanao kodiarana amin'ny gadra Fiat aho na dia tamin'ny fitaovan-tsofina faharoa aza. Tsy maintsy namoy ny Spyder aho rehefa tsy afaka namaky ireo fenitry ny famoahana an'i Kalifornia.
Ny fifandraisana tamin'ny fiainana taloha dia havaozina amin'ny alàlan'ny Reincarnation
Ny fikarohana reincarnation dia mampiseho fa ny fanahy dia mikasa mandritra ny fotoana hiarahana indray amin'ireo olon-tiana ao amin'ny fidirana amin'ny tany. Ny sasany amin'ireo porofo maharesy lahatra indrindra dia ny tranga momba ny fahatsiarovana ny fahazazana amin'ny fiainana taloha Ian Stevenson, MD avy amin'ny University of Virginia.
Stevenson dia nandinika ireo kambana Xinsnk kambana, izay tamin'ny fahazazany dia nahatsiaro ny fiainana taloha izay nahitana fifandraisana matanjaka teo amin'ny fiainana, izay nanamarina tamim-pahamarinana. Raha hijery ity fanadihadiana kambana ity dia tsidiho ny:
Ian Stevenson, MD Past Life Twin Study
Ireo talenta tamin'ny fiainana taloha tao amin'ny rahalahin'i Dodge | AeroMobile Founder Reasesa Cases
Ankoatr'izay, ny fikarohana reincarnation koa dia manondro fa ny fanahy dia miforona indray miaraka amin'ireo talenta sy filana mitovy. Raha te hahalala bebe kokoa, azafady, mandehana:
Talenta fiainana taloha, fahaiza-manao ary famokarana ankizy
Raha fantatro fa ny fanahy dia mikasa ny hiaraka amin'ny havan-tiana indray, dia nanontany tena aho raha lasa niforona indray ny rahalahin'i Dodge tamin'ny vanim-potoana ankehitriny. Niara-niasa tamin'ny mpankafy tranainy malaza aho, Kevin Ryerson, matetika hatramin'ny 2001. Kevin dia nampita fanahy iray antsoina hoe Ahtun Re, izay nanaporofo tamiko fa afaka manao fampahafantarana ny fiainana taloha izy miaraka amin'ny mari-pahaizana ambony.
Nandritra ny fivoriana niarahana tamin'i Kevin, nanontaniako i Ahtun Re raha nihaona tamin'ny fotoana ankehitriny ny rahalahin'i Dodge. Ahtun Re dia nilaza tamiko fa efa niverina tamin'ny fiainana tany Eropa Atsinanana izy ireo ary nanangana fiara mandeha fiaramanidina. Miaraka amin'ny fikarohana kely dia toa ny Jaraj Vaculik sy Stefan Klein avy any Slovakia no kandidà faran'izay tsara indrindra, firenena izay anisan'i Yugoslavia talohan'ny nanambaran'ireo firenena mpikambana ny fahaleovan-tena taorian'ny fianjeran'ny Sovietika.
Jaraj Vaculik sy Stefan Klein dia nanangana ny orinasa AeroMobile, orinasa mandroso sy manamboatra fiara mandeha fiaramanidina.
Tamin'ny fotoam-pivoriana manaraka niaraka tamin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re dia nanamafy fa nihaona indray ny rahalahin'i Dodge ho Jaraj Vaculik sy Stefan Klein.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny maritrano endrika endrika na endrika endrik'i Horace Dodge | Jaraj Vaculik sy John Dodge | Mitovy ny Stefan Klein.
Talenta fiainana taloha sy fitondran-tena ary fahaiza-manao: Mpirahalahy tao amin'ny indostrian'ny fiara amerikanina ireo rahalahin'i Dodge ary i Jaraj Vaculik sy Stefan Klein no mpitarika amin'ny sehatry ny fiara vao misondrotra.
Fifandraisana nohavaozina amin'ny alàlan'ny Reincarnation: Mpirahalahy i Horace sy John Dodge ary namolavola azy ireo ho mpiara-miasa mpanorina ao AeroMobile izy ireo.
Fiovam-pirenena: Teraka tany Etazonia ireo rahalahin'i Dodge, raha i Juraj Vaculik sy Stefan Klein dia Slovakian. Ny fahatakarana fa ny fanahy dia afaka manova ny fivavahana, ny zom-pirenena ary ny firaisam-poko avy amin'ny androm-piainany mankany amin'ny iray hafa dia afaka manampy amin'ny famoronana tontolo milamina kokoa, satria ny ankamaroan'ny fifandirana sy ny ady dia mifototra amin'ny fahasamihafana amin'ireo marika ara-kolontsaina ireo.